Taariikhda Siideynta Yae Miko ee Saamaynta Genshin 2.5 ayaa soo daatay! - Ciyaaraha
Taariikhda Siideynta Yae Miko ee Saamaynta Genshin 2.5 ayaa soo daatay!
Waa maxay Taariikhda Siideynta Yae Miko ee Saamaynta Genshin 2.5?
Muujintii Ku Saabsan Saamaynta Genshin 2.5 Ku lug lahaanshaha Yae Miko
Yae Miko, oo ah jilaagii ay dad badan oo Socdaal ahi rajaynayeen inay wax ku arkaan, waxa laga yaabaa inay si fiican uga soo muuqdaan Genshin Implications 2.5 mar mustaqbalka.
Iyadoo la raacayo tiro badan Saamaynta Genshin 2.5 muujinta, Yae Miko waxay noqon doontaa dabeecad mudan in la ciyaaro waxaana lagu isticmaali karaa cusboonaysiinta 2.5. Dhawr qaybood oo xog ah oo la daatay ayaa xitaa sheegay qalabka ay u baahan doonto iyo sidoo kale faahfaahin kale oo aan faa'iido lahayn sida calaamadeeda shakhsi ahaaneed.
Yae Miko ma wuxuu qarka u saaran yahay inuu noqdo jilaa caan ah oo taxanaha ah? Sawirada awooda leh ee Yae Miko ayaa dhawaan lagu soo bandhigay akoontiga rasmiga ah ee Genshin Implications akoontiga warbaahinta bulshada, kaas oo tweeted sawirka farshaxanka.
Baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho ayaa muddo gaaban gudaheed si weyn looga dareemay, taasoo ahayd wax lala yaabo oo lama filaan ah. Waxaa la filayaa in adduunka la soo daabici doono Febraayo 16-keeda, 2022, iyadoo lagu salaynayo dhokumantiyada Genshin Implications 2.5 ee faraha badan ee lagu faafiyay internetka.
Sidoo kale akhri: God of War Ragnarok Siideynta 2022 Waxaa Xaqiijiyay PlayStation [Faahfaahin Dhameystiran]
Ka qaybgalayaasha ciyaaraha waxay hadda iibsan karaan rinjiyeynta rasmiga ah ee Yae Miko, kaas oo markii hore aan la heli karin. In kasta oo qaab-dhismeedkeedu uu ku jiray ciyaarta ciyaarta dhawr bilood hadda, miHoYo waligeed ma daabicin wax sawiro ah oo muujinaya Yae Miko nafteeda, sida ay u sameeyeen iyaga oo la kaashanaya hababka kala duwan ee ciyaarta ee fur furan.
Muuqaalkeeda kala duwan awgeed, tiro badan oo ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa saadaaliyay inay noqon doonto mid mudan inay ciyaarto, waxayna u muuqataa inay si buuxda u saxan yihiin.
Baraha bulshadu ku xidhiidho ma sheegin wakhti cayiman oo la bilaabayo bandhiga aduunka, laakiin waxa ay ka dhigan tahay in sida ugu dhakhsaha badan loo sii dayn doono. Dadka safarka ah waxay horeba uga war hayeen isku aadka Genshin Implications 2.4, oo ay ku jiraan:-
Xiao rerun oo lagu daray banner Shenhe
Ganyu iyo Zhongli ayaa dib loo dooranayaa.
Natiijo ahaan, uma badna in Yae Miko uu soo muuqdo. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin, haddana waxaa la isla dhex maraa inay ka soo muuqato Genshin Effect 2.5. Xusuusnow in jile kasta oo lagu muujiyo oo lagu muujiyo gacanta rasmiga ah ee Genshin Influence social media had iyo jeer waa la daabici doonaa sida ugu dhakhsaha badan ka dib marka la muujiyo oo la muujiyo.
Marka la eego sharraxaadaha iyo tusaalooyinka, Shenhe iyo Yun Jin waxay ka dhex muuqdaan kuwa ugu caansan, iyadoo hore loogu muujiyey cusboonaysiinta 2.4. Ugu dambeyntii, waxaa la go'aamiyay in lagu daro ogeysiiska.
Tiro daadad ayaa dhacay oo ay ku lug lahaayeen jilayaashaas badan, si la mid ah sida ay jireen tiro daadadyo ah oo ku lug lahaa Yae Miko ee Saamaynta Genshin 2.5. Natiijooyinka calaamadahan, waxay ku garaacday naqshadda la cusbooneysiiyay.
Sidoo kale akhri: Madden 23: Taariikhda Siideynta Macquulka ah ee Bixinta & Cusbooneysii Ugu Danbeeyay 2022!
Muujintaas gaarka ah waxay soo jeediyeen in Yae Miko uu noqon doono qof ku habboon inuu ku ciyaaro Genshin Impact 2.5 ka hor inta aan la helin Genshin Effect warbaahinta bulshada ee rasmiga ah oo soo dhejinta sawirka dabeecadda awooddaas. Dhacdada lagu soo bandhigay qaybta hore waxay u muuqataa inay dhacayso, waxayna dhacday dhowr maalmood ka hor inta aan la sii dayn sawirada cusub ee Yae Miko.
Dhawr daahsoon ayaa tilmaamay inay runtii ka soo muuqan doonto Saamaynta Genshin 2.5; si kastaba ha ahaatee, kani waxa uu soo jeedinayaa wakhtiga la bilaabayo ee la saadaaliyay, kaas oo aad u gaar ah. Xarafka Y waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu matalo Yae Miko (xaruufaha R iyo K waxay matalaan Raiden Shogun iyo Kazuha oo dib u bilaabaya, siday u kala horreeyaan).
Haddii ay tani sax tahay, Yae Miko waxaa lagu soo bandhigi doonaa astaanta ugu horreysa ee Genshin Effect 2.5, taasoo noqon doonta tii ugu horreysay ee taxanaha.
Xaqiiqda ah in Miko ay awood u yeelan doonto in ay xakameyso tiro badan oo ah burburka Electro, sida lagu muujiyay dukumiintiyada la sii daayay, iyo sidoo kale dhammaan muujinta cusub ee la cusbooneysiiyay, waxay u muuqdaan inay taageerayaan fikradda ah inay noqon doonto go'aaminta aasaasiga ah ee jumlada iyada oo qayb ka ah bilawga. wareeg.
Waxaa daaha laga qaaday in Yae Miko uu sidoo kale shaqaaleysiin doono Shimenawa’s Reminiscence Establishment, sida lagu sheegay xog sir ah. Tani waxay macno fiican samaynaysaa, marka la eego in dhismaha Miko uu la mid yahay farshaxanada ay qaateen shakhsiyaad kala duwan.
Qayb kasta oo ka mid ah saamaynta Genshin ee la sii daayay dhawaan waxa la kala saaray muddo ku dhow 06 toddobaad. Caadi ahaan, boodhadhku waxay dhacaan saddex toddobaad ka dib iyaga oo iskood ah. Tusaale ahaan:
Sidoo kale akhri: Xuduudaha Sonic: Taariikhda Siideynta: Trailer & Wararka Ciyaaraha Sonic-ka ee Adduunka Furan iyo Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato!
Nooca 2.0 hadda waa la heli karaa. 2.1: Laga bilaabo 21ka Luulyo ilaa 1da Sebtembar, 20212.1 -> 2.2: Laga bilaabo Sebtembar 1st ilaa 13ka Oktoobar, 20212 laga bilaabo Noofambar 24, 2021, ilaa Janaayo 5, 2022, waa 2.4 sano.
Mid kasta oo ka mid ah waqtiyadaas waxaa loo qaybiyaa muddo lix toddobaad ah. Sidoo kale, haddii Yae Miko ay saaran tahay boodhadhka ugu horreeya ee Genshin Effect 2.5, waxay joogi doontaa marka casriyaynta loo diyaariyo iibsashada markii ugu horreysay. Natiijo ahaan, wakhtiga kama dambaysta ah ee lix toddobaad oo bilaabmaya Janaayo 5, 2022, waa in la tixgeliyo. Natiijo ahaan, Yae Miko (iyo, kordhinta, Genshin Saamaynta 2.5) ayaa la sii deyn doonaa Febraayo 16-keeda, 2022, sida ku cad jadwalka.
Taasi waa wax walba oo ku saabsan Yae Miko ee ku jira Saamaynta Genshin 2.5. La Soco Warar Dheeraad Ah Oo Ku Xidhnow Boggeena Wixii Warar Ah Ee Ciyaaraha Iyo Ogaysiisyada. Waad ku mahadsan tahay akhrinta!
Parker Schnabel saaxiibtiis: Waa ayo qofkani? Sheekadiisa Jacaylka oo dhamaystiran!
Xilliga Orville 3: Taariikhda Siideynta & Xaqiijinta Hulu!
ma u baahan tahay netflix xafladda netflix
websaytyada filimada tooska ah ee bilaashka ah iyada oo aan la gelin
dhimis arday ee xafiiska microsoft
xeerarka pokemon ee wali shaqeeya
app u roga fiidiyowyada youtube -ka mp3
youtube -ka iskuulada iska qor